Makedonia: Fampiasana media vaovao amin’ny fampielezan-kevi-pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2018 3:18 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, Shqip, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Namakafaka ny “sambany” fampiasan'ireo antoko politika lehibe ny aterineto sy ny media vaovao amin'ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana parlemanta alohan'ny fotoana, hotontosaina amin'ny 1 Jiona 2008 ireo mpanoratra ao amin'ny bilaogy media Makedoniana, Komunikacii.net.
Ratsy: tsy hita amin'ny fampiasan'izy ireo media sosialy ny lafiny “sosialy (fiarahamonina)”. Dikantsoratra avy tamin'ny kabarin'izy ireo tamin'ny famoriam-bahoaka ny ankamaroan'ny lahatsoratra bilaogy, ary ny votoaty dia mifototra tamin'ny dokambarotr'izy ireo tamin'ny fahitalavitra sy ny fampiasana zavatra hafa toy ny media mahazatra, mpanao fanadihadiana, mpanao gazety sy mpiantsehatra tahaka izany fa tsy bilaogy isan'olona. Lava ny lahatsoratra, karazan'olona maro no kendrena isaky ny lahatsoratra, fa tsy misy ny zava-niainana manokana ary tsy ampy ny avy amin'ireo mpanao politika. Na ny fahatsapana ny fisehoan-dry zareo aza tsy misy, ka tsy manana ny fiavahany ilaina ny blaogin'izy ireo, sy zorom-pijerena manokana. Natao ho an'ny fahitalavitra ny horonantsary fa tsy ho an'ny vilaogy (bilaogin-dahatsary), fanentanana vita pirinty tsy mifanentana amin'ny fitaovam-pampitam-baovao manely haingana, sary toy ny fandravahana fa tsy toy ny loharanom-baovao (anatiny). […]
Tamin'ny fanehoan-kevitra tamin'izany lahatsoratra izany, bilaogera malaza eo an-toerana Ribaro, nanoratra hoe: